သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၇-၁) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 1:58 PM | No မှတ်ချက် |
မြန်မာ အဂတိလိုက်စားမှု အနည်းငယ်ကျဆင်း
ဖိနှိပ်ရေး ဥပဒေများ NLD ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ HRW မျှော်လင့်
တအာင်းတပ်မှ ဖမ်းဆီးထားသော ရွာသားများအား ပြန်လွှတ်ပေးရန် ဒေသခံများ ဆန္ဒပြတောင်းဆို
လှိုင်သာယာရဲအရာရှိသတ်သည့် တရားခံနှစ်ဦးအား အလုပ်ကြမ်းနှင့်ထောင်ဒဏ် နှစ် (၂၀) ချမှတ်
ဗီယက်နမ်ကုန်တင်သဘောင်္ နစ်မြုပ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်အား စစ်ဆေး၍ ဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက် သွားမည်
ကျောက်ဖြူတွင် ၀င်ရောက်ရှာဖွေသူများကို ဓါးနှင့်ခုခံသူ နေအိမ်မှ မူးယစ်ဆေးဝါးဖမ်းမိ
အအေးဒဏ်ကြောင့် ကျိုင်းတုံ၌ အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံး
မူဆယ်တွင် ပြည်သူ့ စစ်နှစ်ဖွဲ့ အကြား ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားဟုဆို
အမေရိကန် ဖို့တ်ဝိန်း နဲ့ မော်လမြိုင်ကို ညီအမမြို့တွေ အဖြစ် သဘောတူသတ်မှတ်
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မှာ လူသတ်မှု၊ မုဒိန်းမှုကျူးလွန်သူ အများအပြားပါဝင်
ချစ်သူချင်းချိန်းတွေ့စဉ် အမျိုးသားက အမျိုးသမီးမျက်နှာအား ဓားဖြင့်ထိုးခြစ်မှုဖြစ်
ဘားအံတွင် စိတ်ကြွဆေးပြားများနှင့် လက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံး သိမ်းဆည်းရမိ
သီးနှံလျော်ကြေးပေးဖို့ မြန်မာဝမ်ပေါင်ကိုယ်စား နယ်လုံဝန်ကြီးငြင်းဆို
လ၀က၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထဲရေးအောက် ထားရှိဖို့အဆိုအပေါ် တုံ့ပြန်မှု
တံခွန်တိုင်၊ ယန္တရားရပ်ကွက်တွင် မီးလောင် မီးသတ်အရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ကားပေါ်မှပြုတ်ကျ
သီရိရတနာဈေးတွင် နေ့ခင်းကြောင်တောင် မီးထပ်လန့်၍ ဈေးသူ ဈေးသားများ စိုးရိမ်ပူပန်နေ
ရီပတ်ဘလစ်ကန် သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်း ယှဉ်ပြိုင်မှု Trump နဲ့ Cruz အကြိတ်အနယ်
ဖားကန့် မြေစာပုံ ပြိုပြန် ပေမယ့် လူတွေ ကံသီပြီး အသက်ဘေးက လွတ်
မဟာချိုင်မှာ မြန်မာလုပ်သားတွေ အဖမ်းခံရ
စမ်းချောင်းတွင် ဒုရဲမှူးတစ်ဦး လုယက်ခံရမှုမှ ထွက်ပြေးနေသူကို ဖမ်းဆီးရမိ
အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ တရားရေးကဏ္ဍတွေ မှာ ခြစားမှုတွေ ရှိ
မင်္ဂလာဒုံ ပျဉ်းမပင် ကျူးကျော်တွေကို ဖယ်ရှား
Posted: 27 Jan 2016 07:04 AM PST
Transparency International အဖွဲ့ရဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွက် စစ်တမ်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဂတိ လိုက်စားမှု အခြေအနေက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၈ နိုင်ငံထဲမှာ အဆင့် ၁၄၇ မှာ ရှိနေတယ်လို့ စစ်တမ်းအသစ် တခုက ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတ၀န်းက နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၈ နိုင်ငံရဲ့အဂတိလိုက်စားမှု အခြေအနေတွေကို စောင့်ကြည့်ပြီး ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ Transparency International အဖွဲ့ရဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွက် စစ်တမ်းသစ်မှာ အခုလို ဖော်ပြလိုက်တာ ဖြ
Posted: 27 Jan 2016 07:00 AM PST
ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီ နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်၊ နောက် အရင်အစိုးရ လက်ထက်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ ဥပဒေတွေ၊ အဖြေမရှာနိုင်ခဲ့တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေကို နောင်တက်လာမယ့် အစိုးရအနေနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ အားလုံးက မျှော်လင့်ထားကြောင်း HRW အဖွဲ့ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ကျင်းပခဲ့တာလို့ လေ့လာသူတွေက သုံးသပ်ထားပေမယ့်
Posted: 27 Jan 2016 06:33 AM PST
ဂျန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက် ၂၀၁၆ တအာင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA မှ ဖမ်းဆီးထားသော မိုင်းဝီးနှင့်ဝမ့်ဟိုပန်ရွာသားများ အား ပြန်လွှတ်ပေးရန် ဒေသခံများက ယနေ့နံနက် ဆန္ဒထုတ်ဖော် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ “အပြစ်မဲ့ပြည်သူ ၁၂ ယောက် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ လွတ်မြောက်လာဖို့ပါ။ သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေက လူသားချင်း စာနာထောက်ထားပြီး ၀ိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ မိဘဆွေမျိုးတွေက ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတာပါ”ဟု မိုင်းဝီး ဒေသခံ လုံးစို
Posted: 27 Jan 2016 06:26 AM PST
၂၀၁၅ ခုနှစ်က အောင်ဇေယျ အိမ်ယာလမ်း လမင်ရိပ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့ ၌ အမှုလိုက် ရဲအရာရှိအား သတ်ခဲ့သည့် တရားခံနှစ်ဦးအား ပုဒ်မ ၃၀၂ (၂) ဖြင့် မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးက ဇန်န၀ါရီ ၂၇ ရက်နေ့က အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် နှစ် (၂၀) ချမှတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ တရားခံချစ်ကိုနှင့် တက်ပုတို့အား ကြိုတင်ကြံရွယ်ချက်ဖြင့် လူသတ်မှုကျူးလွန်သည့် ပုဒ်မ ၃၀၂ (၁)(ခ) ဖြင့် စွဲချက်တင်ထားသောအမှုအား တရားသူကြီးမှ စစ်ဆေးရာတွင် ကြိုတ
Posted: 27 Jan 2016 06:13 AM PST
နစ်မြုပ်သွားသော ဗီယက်နမ်သဘောင်္ပေါ်မှ သဘောင်္သားများကို ဆီတင်သဘောင်္ပေါ်တွင် ကယ်ဆယ်ထားစဉ် (ဓာတ်ပုံ-မြဝတီ) ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက် (ဆင်ဟွာ) ရန်ကုန်မြစ်ဝ အနီးတွင် ဗီယက်နမ် ကုန်တင်သဘောင်္ နစ်မြုပ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်အား ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဒေါပုံမြို့နယ် ရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန (DMA)မှ ဖြစ်စဉ် အသေးစိတ်ကို စစ်ဆေး၍ ဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာ
Posted: 27 Jan 2016 06:02 AM PST
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ဦးရွှေမောင်ကို တွေ့ရစဉ်။ Photo: Shwe Maung Facebook လက်ရှိ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်ကို ငွေကြေးလိမ်လည်မှုနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ရဲစခန်းက ဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ရှိုင်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးစိုးနိုင်က ပုဒ်မ ၄၂၀ လိမ်လည်မှုနဲ့ အမှုဖွင့်တိုင်ကြားတာဖြစ်ပြီး ဦးရွှေမောင်က
Posted: 27 Jan 2016 05:43 AM PST
ရခိုင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဦးအေးသာအောင် နဲ့ ဦးအေးမောင် (Photo from Rakhine CJ FB) ဒီတပတ် မြန်မာ့မျက်မှောက်ရေးရာ ဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီက အမတ်တဦးကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူး မပေးရင် သူတို့ပါတီဟာ NLD အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာ မဟုတ်ဘဲ အတိုက်အခံအဖြစ် ရပ်တည်မယ်ဆိုတဲ့ ကြေညာချက်ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာရော ANP ပါတီတွင်းမှာပါ ဂယက်ရိုက်နေတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်၊ ကြေ
Posted: 27 Jan 2016 04:52 AM PST
အသက် ၅၇နှစ် မစ်စတာစုရတ် ထန်ယာနွန်ဆိုတဲ့ ထိုင်းအမျိုးသား တစ်ဦးသည် သူ့ကိုယ်သူ မော်ဒယ်လင်း(Modeling) ဆိုပြီး လှပချောမောသောကျောင်းသူမလေးတွေကိုလိမ်လည် ခေါ်ဆောင်မှုပြုလုပ်နေပါတယ်။ အဆိုတော် လုပ်မလား သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးလုပ်မလား ကြော်ငြာ မင်းသမီးလုပ်မလား အကသမားလုပ်မလား အနုပညာလောကမှာ သူပိုင်တယ် သူက (Modeling) သူအဆက်အသွယ် များတယ်ဆိုပြီး အမျိုးသမီးချောလေးတွေကို ဆွဲဆောင်ပြောဆိုပြီး စိတ်ဝင်စားသော အမျိုးသမီးေ
Posted: 27 Jan 2016 04:53 AM PST
ကျောက်ဖြူ၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၇ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့တွင် အိမ်တအိမ်အား ၀င်ရောက်ရှာဖွေရာ အိမ်ရှင် ဖြစ်သူက ဓါးဖြင့် ခုခံခဲ့သော်လည်း ၎င်းအိမ်အတွင်းမှ WY စာတန်းပါ စိတ်ကြွဆေးပြားများကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ယနေ့နံနက် ၅ နာရီခန့်က ကျောက်ဖြူခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရဲ့ ညွန်ကြားချက်ဖြင့် ကျောက်ဖြူမြို့၊ ရခိုင် ပိုက်ဆိပ် ရပ်ကွက်၊ ဆားပြင်ကွင်း ဆင်းလမ်းနေ ဦးစံခင်မောင် ၏နေအိမ်သို့ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ရဲတပ်
Posted: 27 Jan 2016 04:31 AM PST
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့တွင် အသက် ၃၀ ၀န်းကျင်အရွယ် ခရီးသွား အမျိုးသားတစ်ဦး မိုးကာတဲ အတွင်း အိပ်နေရာမှ အအေးဒဏ်ကြောင့် သေဆုံးမှု ဇန်န၀ါရီလ(၂၆)ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကျိုင်းတုံမြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်။ "ကျွန်တော်တို့ သိရသလောက်တော့ မိုင်းပျဉ်းမှာ အလုပ်သွားလုပ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ မိုင်းပျဉ်းကနေ ပြန်လာပြီးတော့ တဲထဲမှာ ၀င်နားပြီး အိပ်ရာကနေ အခုလို ဖြစ်သွားတာဖြစ်မယ်။ သူ့ကိုကြည့်ရတာလ
Posted: 26 Jan 2016 08:08 PM PST
မူဆယ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၇ ။ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) မူဆယ်မြို့ ၌ ပန်ဆေးပြည်သူ့ စစ်အဖွဲ့ နှင့် နမ့်ခမ်းဌာနေပြည်သူ့ စစ်အဖွဲ့ တို့ အကြား လောင်းကစားဝိုင်း ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး နှစ်ဖက် အခြေအတင် စကားများရာမှ ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ၊ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရာ နေရာသို့ရောက်ရှိနေသည့် အမည်မဖော်လိုသူ မူဆယ်မြို့ခံတစ်ဦးက ဇန်န၀ါရီလ ၂၆ ရက်နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ကမ္ဘောဇတိုင်းသတင်းဂျာနယ်သို့ပြောသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဇန်န၀ါ
Posted: 26 Jan 2016 07:58 PM PST
မော်လမြိုင်မြို့ဝင် ဆိုင်းဘုတ်ကိုတွေ့ရစဉ် Photo: RFA အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက မြန်မာလူမျိုးအများအပြားနေထိုင်တဲ့ ဖို့တ်ဝိန်း (Fort Wayne) မြို့နဲ့ မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့တို့ကို ညီအမမြို့တွေအဖြစ် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖို့တ်ဝိန်းနဲ့ မော်လမြိုင်မြို့တွေကို ညီအမမြို့တွေအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ကို ဖို့တ်ဝိန်းမြို့တော်ဝန် တွန်ဟင်နရီ (Tom
Posted: 26 Jan 2016 07:53 PM PST
ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ကို တွေ့ရစဉ် Photo: RFA သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ အကျဉ်းသား ၁ သောင်း ၁ ထောင့် ၅ ရာကျော်ထဲမှာ လူသတ်မှုနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသူ ၂၃၀၀ ကျော်၊ သားမယားအဓမ္မပြုကျင့်မှု (မုဒိန်းမှု)နဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသူ ၁၇၀၀ ကျော်၊ လုယက်မှုနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသူ ၅၀၀၀ ကျော် ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မနေ့ကကျင်းပတဲ့ လွှတ်တော်ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း အမျိုးသား
Posted: 26 Jan 2016 06:02 PM PST
ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၂၆ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက် နံနက် ၄ နာရီခန့်က အလုံမြို့နယ် ဌာနာရပ်ကွက် လိုတရ စားသောက်ဆိုင်တွင် သမီးရည်းစားချိန်းတွေ့ရာမှ စကားများကြပြီး အမျိုးသားက အမျိုးသမီးအား စက္ကူဖြတ်သည့် ခလုတ်ဓားဖြင့် မျက်နှာအား ထိုးခြစ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အလုံမြို့နယ် ဌာနာရပ်ကွက် အလုံလမ်းရှိ လိုတရစားသောက်ဆိုင်တွင် အလုပ်လုပ်နေသော မ---(၂၄)နှစ်သည် အလုံမြို့နယ် စောရန်ပိုင်အရှေ့ရပ်ကွက် နှင်းဆီကုန်းလမ်း အမှတ်(၇၁/မြေညီ)တွင်
ဘားအံ ဇန်နဝါရီ ၂၆ ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့နယ် သာမညကျေးရွာအုပ်စု သာမညကျေးရွာ လွမ်းမြတောင်ရပ်ကွက်ရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်၌ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးများရောင်းချနေကြောင်း သတင်းအရ ကရင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သောပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြင့် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက် နံနက်က ဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးရာ လက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများကို သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းနေ့ နံနက် ၅နာရီ ၄၅မိနစ်ခန့်က အဆိုပါနေ
ဆာလင်းကြီးမြို့နယ် ဒေသခံများ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ မြေယာနစ်နာကြေး မယူထားတဲ့ လယ်တွေအတွက် သီးနှံလျော်ကြေးပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ဒေသခံတွေနဲ့ မြန်မာဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက တာဝန်ရှိသူတွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ချိန်းဆိုထားပေမဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း နယ်လုံဝန်ကြီးနဲ့သာ တွေ့ဆုံခဲ့ရပြီး သီးနှံလျော်ကြေး မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာ ပြောဆိုတဲ့အတွက် ဒေသခံတွေနဲ့ တင်းမာမှုဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲ ပျက်ခဲ့ရပါတယ်။ အြ
Posted: 26 Jan 2016 06:01 PM PST
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအောက် ပြောင်းရွှေ့ဖို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အဆို တင်သွင်းထားတဲ့ အစီအစဉ်ကို ဒီကနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ဥပဒေမူကြမ်းကော်မတီက တင်သွင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ နိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေမှာ စစ်တပ်အနေနဲ့ ပိုပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ ရှိစေဖို့ အခုလို လ၀က ကို စစ်တပ်အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပူးပေါင်းဖို့
မန္တလေး ဇန်နဝါရီ ၂၆ မန္တလေး ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် တံခွန်တိုင်-ယန္တရားရပ်ကွက် အမှတ် ၃ လမ်းနှင့် ၂ လမ်းအကြားတွင် ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီခွဲ ခန့်က မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မီးသတ်ကားပေါ်မှ အရန်မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ကားပေါ်မှ ပြုတ်ကျ ခဲ့သဖြင့် မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး သို့ ပို့ပေးခဲ့ရကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။ မီးငြှိမ်းသတ်ရန် အရေးပေါ် ရောက်ရှိလာစဉ် ရပ်ကွက်အဝင် သွယ်တန်းထားသည့်
မုံရွာ ဇန်နဝါရီ ၂၆ မုံရွာမြို့ သီရိရတနာဈေးတွင် မီးနှစ်ကြိမ်လောင်အပြီး ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်ညနေ ၅ နာရီကျော်ဈေးသိမ်းခါနီးတွင် ဈေးအနောက်ဘက်တန်း ခေါင်မိုးသွပ်ပြားပေါ်အမှိုက်များမီးစွဲနေသည်ကို ဈေးသူဈေးသားများ တွေ့၍ ဝိုင်းဝန်းငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ ''ဈေးသိမ်းပြီး ရွာပြန်မလို့လုပ်နေတုန်း အနောက်ဘက်တန်းခေါင်မိုး ပေါ်က မီးခိုးတွေမြင်တာနဲ့ ဝိုင်းငြှိမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ လောင်နေတာက သွပ်မိုးပေါ်က သစ်ရွက်ေ
Posted: 26 Jan 2016 05:57 PM PST
၂၀၁၆ အမေရိကန် သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် အမည်တင်သွင်းမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီက ပထမဆုံးအကြိမ် Iowa ပြည်နယ်မှာ မဲပေးဖို့ ရက်ပိုင်းသာ လိုတော့တဲ့ အချိန်မှာပဲ၊ ကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းရှင် ကုဋေကြွယ်သူဌေးကြီး Donald Trump နဲ့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒီ Texas ပြည်နယ် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Ted Cruz တို့ အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်ရဖို့ ရှိနေတဲ့အကြောင်း နောက်ဆုံးကောက်ခံတဲ့ နိုင်ငံရေးစစ်တမ်းတွေက
Posted: 26 Jan 2016 03:47 PM PST
မြေစာ ကို စွန့်ပစ် ကြတဲ့ အခါ ပေ ရာ နဲ့ ထောင် နဲ့ ချီပြီး မြင့်တဲ့ အထိ အရောက် မခံ ပဲ ပေ ၅၀ ဝန်းကျင် သာ ထားကြဖို့ အမိန့် ထုတ် ထား။ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့ ညက ဖားကန့်ဒေသ လုံးခင်း မြို့နယ် ထဲမှာ ကျောက်စိမ်း မိုင်းတွင်း မြေစာပုံ ပြိုကျ မှု ထပ်မံ ဖြစ်ခဲ့တာမှာ ရေးမဆေး ကျောက် ရှာ ဖွေ နေသူ တွေ ရာ ဂဏန်း ရှိနေပေမယ့် အချိန်မီ ရှောင်တိမ်း နိုင်ခဲ့လို့ သေဆုံး ဒဏ်ရာရ သူ မရှိဘူး ဆိုပြီး ဒေသခံ ရဲစခန်း က ဘီဘီစီ
ငါးလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်သမား တွေကို တရားဝင် အလုပ်လုပ်ခွင့် လက်မှတ်တွေ ထုတ်ပေးဖို့ ထိုင်း အစိုးရ က ညွှန်ကြားထား။ ထိုင်း နိုင်ငံ မဟာချိုင် မြို့ က ငါးပုဇွန် ရေထွက် ပစ္စည်း ထုတ်လုပ် တဲ့ လုပ်ငန်း တွေ ကို ထိုင်းရဲ တွေ ဝင် စစ် ခဲ့ ကြတာ မှာ တရား မဝင် အလုပ် လုပ်ကိုင် နေလို့ ဆိုပြီး မြန်မာ နိုင်ငံသား ၁၀ ဦး အခု ရက်ပိုင်း ကပဲ အဖမ်း ခံလိုက် ရပါတယ်။ အဲဒီလို တရားမဝင် လုပ်သား တွေ ကို အသုံးပြု တဲ့ အလုပ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စမ်း ချောင်းမြို့နယ် မဟာမြိုင်လမ်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒုရဲမှူးတစ်ဦး လုယက်ခံရမှုမှ ထွက်ပြေးလွတ် မြောက်နေသူကို ဖမ်းဆီးရမိပြီဖြစ်ကြောင်း စမ်းချောင်းမြို့မရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး ဒုရဲမှူး သိန်းဝင်းက ပြောသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ယခုလ ၂၃ ရက် ည ၈ နာရီ ၄၅မိနစ်က တာဝန်ပြီး ဆုံး၍ အလုပ်မှ နေအိမ်သို့ လမ်းလျှောက်ပြန်လာသော ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှ ဒုရဲမှူး ဒေါ်မိုးသူဇာကို ဆိုင်က
ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ် Photo: RFA တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိဖို့အတွက် အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍနဲ့ တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်ဆင့်မှာ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုတွေ ရှိနေတာကို တွေ့ရကြောင်း တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိ်မ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီက ဒီနေ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ထံ တင်သွင်းတဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ပါရှိပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီက ၁၂
Posted: 26 Jan 2016 03:46 PM PST
ရာသီ ဥတု ဆိုးရွား နေချိန် မှာ အခုလို အင်အားသုံး ဖြေရှင်းတာ နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဝေဖန်မှု တွေ ရှိနေ အင်္ဂါနေ့ မနက်ခင်းက မင်္ဂလာဒုံ ပျဉ်းမပင် စက်မှုဇုံ အနီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက် နီးပါးက နေခဲ့ ကြတဲ့ အိမ် ထောင်စု တစ်ထောင် ကျော် လောက်ဟာ နေစရာ မရှိ ဖြစ်သွားကြ ပါပြီ။ ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ဖယ်ရှားခဲ့ သလို မင်္ဂလာဒုံ ပျဉ်းမပင် စက်မှူ ဇုံ ဧရိယာထဲ ရောက်နေတဲ့ အိမ် ထောင် ကျော် ကို အင်္ဂါေ
💦 ဆက်ဆံရေး 💦
Powerful Speech နှုတ်ကောင်းလျှင် ပြည်စိုး
ဝက်ဝံစစ်သားကြီး (သို့မဟုတ်) Voytek
ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို သင့်ချစ်သူအပေါ် သစ္စာရှိပါ
ချစ်သား အားမငယ်နဲ့ တဲ့
လှပသော English စကားလုံးများ
တယ်လီပသီ ( ဝါ ) အီးအက်စ်ပီ
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၉-၁)
ခေတ်ပြိုင် မြန်မာစာပေလောက၏ ထင်ရှားသော စာရေးဆရာ ဇော...
" Zika virus မြန်မာနိုင်ငံကိုကူးစက်လာနိုင်၍ ကျန်းမ...
အိုးအိမ် မဲ့ လမ်းဘေး ဘဝ မှ ဟားရ်ဗားဒ် Harvard တက္ကသ...
ဘာသာစကားတစ်ခုကို အမြန်တတ်မြောက်စေမည့် လျှို့ဝှက်ချ...
နေ့စဉ်သုံး လျှပ်တစ်ပြက် အင်္ဂလိပ်ဝါကျများ-၁
မြန်မာတွေပိန်ဖို့ ဒေါက်တာ အေးမင်းထူး
မိုက်ခရိုဆော့ ပိုင်ရှင်ဘီလ်ဂိတ် ပေးသော အကြံဥာဏ် ( ...
💫၈၅မန္တလေးညများကို ' ပြန်လည်လွမ်းဆွတ်သူများ 💫
“ အဖေ့အိမ် ”
ပြန်နွေးစားရင် အန္တရာယ်များသည့် အစာများ
*ချစ်စမ်းမောင် သို့မဟုတ် ကြိုးခြောက်ချောင်းဖြင့်ဖမ...
ကိုက်လန် ( ဟင်းရွက်တို့ရဲ့ ဘုရင်မ)
Today Myanmar အိမ်ရှင်မများအတွက်ထမင်းချက်ရာတွင် ...
တရားခံ မမိရင် ငါတို့လုပ်တာ၊ အစိုးရလုပ်တာတဲ့
ဘ၀တွေတိုးတက်ဖို့ မြန်မာတွေ ဘာတွေပြင်ရမလဲ
ရိပ်ခနဲ ရိပ်ခနဲ မူးသွားတာ ဘာကြောင့်လဲ ... ?
🎸သောဒီဝေ ပြောသော ရော့ခ်ဒိုင်ယာရီ 🎸
ဘာသာစကားတစ်ခု လေ့လာရာတွင် သိထားသင့်သည့် အချက် (၁၃)...
အရှက်ရစေခြင်းအတွက် ပေးဆပ်ရမှုများ (17.01.2016.., Da...
လူလိမ်တွေ သုံးနေကျ Rohypnol အိပ်ဆေး/သတိလွတ်ဆေး
( ထိုလေပြည်ကို မြို့မငြိမ်း စေခဲ့ပါသည် ) သို့မဟုတ်...
AEIS (Admissions Excercise For International Stude...
☆ အမေ့လျော့ခံ စစ်သေနာပတိချုပ်တစ်ဦး ☆
Dirty Drugs ဆရာဝန်သုံး လူဆိုးသုံးဆေးများ
" နှစ်လုံးတွဲ စကားတိုလေးများ "-၁၇
လောဘတက်နေတဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေ အတုယူဖွယ်၊
အနော်ရထာ သတ်ခဲ့တဲ့ ရာဇဝင်ထဲက ရှမ်းသတို့သမီး…
Wine feet ဝိုင်နဲ့ခြေထောက်
🎸🎸 ဗမာ့ ဂီတ မြစ်ကြီး တစ်စင်း 🎸🎸
Unknown mixed medicines စပ်ဆေး ဘေးအန္တရာယ်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သူဌေး၏ ၂၁ရာစု ၊ ကမ္ဘာ့ အကြီးကျယ်ဆုံး အလှူ
> ဗုဒ္ဓဘာသာကို မယုံကြည်လို့ မေးမြန်းလာသော မေးခွန်းမ...
“ ဖုန်းဆိုတာ ပန်းတွေ ကြွေလွင့်စေဖို့လား ”
သူရဘွဲ့ရရှိသူများထဲမှ လေးစားမိသည့် ထားဝယ်သူလေး သူရ...